Biyoxidheen - Wikipedia
Biyoxidheen (; ) waa dhisme weyn oo ka samaysan dhagaxaan, biro iyo qalab kale oo badan kaasi oo loogu tallo galay in uu celiyo qulqulka biyaha socda. Biyoxidheenada waxaa loo dhisaa sababo badan oo ka mid tahay in laga sameeyo il biyo dadku isticmaalaan, laga sameeyo koronto, laga waraabiyo beeraha waaweyn iyo in la maamulo socodka iyo jihada biyaha.
Biyoxidheen ku yaala Maraykanka.
Biyoxidheenadu waxay ka mid yihiin kaabayaasha bulshada kuwaasi oo laga helo waxyaabaha aasaasiga ah ee isku xidha isla markaana u adeega magaalo, degmo, gobol, wadan iyo wixii la mid ah. Sida caadiga ah, kaabayaashu waxay u adeegan ama isku xidhaan bulshada waxayna saldhig u yihiin koboca dhaqaale iyo guud ahaan isku socodka shaqada.
Biyoxidheenku wuxuu ka mid yahay waxyaabaha dabiiciga ah ee dadku uga faa'iideeystaan siyaabo badan. Waa marka horee, biyoxidheenadu waxay sameeyaan biyo keydsan oo dadka iyo xayawaanku isticmaali karaan. Sidoo kale, waxaa laga sameeyaa korontada biyaha oo ah hab raqiis ah oo lagu sameeyo koronto.
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Biyoxidheen&oldid=214497"
Last edited on 8 Agoosto 2021, at 22:55
Boggaan waxaa markii ugu danbeesay wax laga badalay 8 Agoosto 2021, marka ee eheed 22:55.